Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Eswatini Breaking News » Ambasady amerikana ao Eswatini fampitandremana: Mijanona ao an-trano!
Vaovao Mafana • Eswatini Breaking News • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Mbola mihenjana ny toe-draharaha ao amin'ny Fanjakan'i Eswatini saingy toa voafehin'ny governemanta, miaraka amin'ireo mpikomy noheverina ho miasa ao amin'ny firenena.
Eswatini Airlink sy ny mpiara-miasa aminy Airlink, ny kaompaniam-pitaterana an-toerana sy ny seranam-piaramanidina afrikanina tatsimo, dia nanafoana ny sidina androany teo anelanelan'ny Johannesburg sy ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena King Mswati III an'i Sikhuphe ao Eswatini, noho ny korontana sivily ao amin'ny fanjakan'ny Eswatini.
Nilaza ny tompon'andraikitra iray amin'ny governemanta eTurboNews: “Mino izahay fa misy mpikomy ao amin'ny firenena ankehitriny.”
Raha ny loharanom-baovao eTN dia tsy misy fanontana gazety anio noho ny korontana nipoaka tao an-drenivohitra Mbabane omaly. Ny radio nasionaly dia mamerina mamerina ny vaovao omaly, ary tapaka ny internet omaly alina.
Ny raharaha any Eswatini dia mijanona ho henjana aorian'ny alina iray miaraka amin'ny curfew.
eTurboNews lahatsoratra momba an'i Eswatini tratra teo anelanelan'i Taiwan sy Shina namintina ny tantara momba an'io fivoarana mitohy io. Mety hanome fanazavana fa ity tranga ity dia mety ho mihoatra lavitra noho ny olom-pirenena romotra mitaky fanovana.
Raha ny angom-baovao avy any Eswatini, nanakatona ny gazety Times of Eswatini ny mpanohitra noho ny fanohanany ny mpanjaka sy ny governemanta. Eswatini Beverages, sampana iray an'ny SABMiller ABinBev izay fananan'ny Mpanjaka Mswati fananana dia nodoran'ireo mpanao fihetsiketsehana.
“Ho tombontsoan'ny fiarovana sy ny fiarovana ny mpanjifanay sy ny mpiasanay, ary amin'ny fifampidinihana amin'ny Airlink namanay, nanapa-kevitra izahay ny hampiato vonjimaika ny asanay amin'ny lalana manelanelana an'i Johannesburg sy Sikhuphe (Eswatini). Hanohy handinika ny zava-misy izahay ary hamerina amin'ny laoniny ny serivisy mahazatra raha vantany vao azo antoka izany, "hoy ny Tale jeneralin'ny Eswatini Airlink, Joseph Dlamini.
Nofoanana ny sidina (30 Jona 2021) dia:
Nandidy ny tsy fahazoana mivezivezy henjana ny tompon'andraikitra ao amin'ny firenena omaly alina ary nanidy ny Internet. Voafetra ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Toa miverina izao. Nisy loharanom-baovao iray nilaza eTurboNews: "Tsy ny tatitra feno no hitanao eto."
Araka ny tatitra tsy voamarina avy amin'ny tariby IOL any Afrika Atsimo, mpiambina bus iray dia niahiahy ary nanokatra siny misy voankazo Nyii (voankazo avy amin'ny hazo Ivorywood mena), nahita zava-baomba miafina ao ambaniny. Ankizivavy 13 taona no nametraka ireo voankazo ireo tao anaty bisy.
Ny masoivoho amerikana dia manoro hevitra ny olom-pirenena amerikana rehetra mba hahatsapa ny korontana ara-panjakana ao amin'ilay Fanjakana. Misy toe-javatra miseho any Eswatini, ao anatin'izany ny fandoroana sy ny fandrobana tranombarotra, fiara ary orinasa. Niorina tao Mbabane ny fihetsiketsehana tontolo maraina ary nikatona ny fivarotana. Ny Masoivohon'i Etazonia dia manentana mafy ny olom-pirenena rehetra, firenena, mba hitsimpon-kanina amin'ny sakafo sy rano ary avy eo hijanona ao an-trano. Nasaina nijanona tao an-trano ny mpiasan'ny masoivoho. Entanina ny olom-pirenena amerikana hisoroka ny làlana lehibe satria manakana ny làlana mankany amin'ny fitaovana mirehitra ireo mpanao fihetsiketsehana. Ny masoivoho amerikana dia hikatona hatramin'ny alarobia 30 jona. Ny olom-pirenena amerikana mila serivisy vonjy maika dia tokony hiantso ny faritra Consular.
Ny masoivoho amerikana dia nanoro hevitra ny olom-pirenena amerikana ao Eswatini mba handray ireto fepetra manaraka ireto:
Raha azo antoka, mitahiry fivarotana sy rano ary avy eo mijanona ao an-trano.
Araho maso ireo haino aman-jery ao an-toerana raha mila fanavaozana.
Aza mitondra fiara